Passion Silk Foulard - Joornaalka Naqshadeynta
Silk Foulard "Xaraare" waa mid ka mid ah walxaha "Salaan". Si fiican ugu laabo xargaha xariir barxadda jeebka yar ama ku dheji sidii farshaxanka oo cimri dheer ha dhigto. Waxay u egtahay ciyaar - shay waliba waxay leeyihiin wax kabadan hal shaqo. "Salaan" waxay dhexmaraysaa xiriir hoose oo ka dhexeeya farshaxannadii hore iyo alaabada naqshadaha casriga ah. Naqshad kastaa waa guntin farshaxan oo gaar ah waxayna sheegeysaa sheeko kale. Bal qiyaas meel kasta oo tafaasiil yar ay ka sheekeyso sheeko, halkaas oo tayadeedu tahay qiimaha nolosha, oo raaxada ugu weyn ay naftaadu run u tahay. Halkani waa meesha "Salaan" ay kugula kulmaan. Farshaxanka ha kula kulmo hana kula da’een!
Magaca mashruuca : Passion, Magaca naqshadeeyayaasha : Milena Grigaitiene, Magaca macmiilka : Regards.
Silk Foulard Milena Grigaitiene Passion